Fanamboarana ny kianjaben’i Mahamasina Ho vahana haingana ny olan'ireo mpiasa
Nidina ifotony nijery ny fivoaran’ny asa momba ny famadihana ny kianjaben’i Mahamasina ho lasa kianja manara-penitra ny 13 mey teo ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny asa.
Tsikaritra taorian’ny fihainoana ny hetahetan’ireo mpiasa sy ny mpampiasa na CSCOD fa mila fanatsarana ao anatin’ny fotoana fohy ny toerana hatorian’ireo mpiasa. Toy izany koa ny toeram-pivoahana sy fidiovana. Ny resaka fahasalamana sy ny fanaovana fitaovam-piarovana na EPI. Niaiky moa ny mpampiasa na CSCOD fa nisy tsy fahatomombanana teo amin’ny fitondran’izy ireo ny mpiasa vokatry ny tsy fahafaha-niomana noho ny fidiran’ny valan’aretina COVID 19, raha ny tatitra voaray ny sabotsy teo.